Nhau - Euroshop 2020 & Couleur Mwenje
Euroshop 2020 & Couleur Mwenje
Iyi ndiyo Couleur Lighting yatora chikamu muEuroShop, iyo 2020 edition yechitoro chakakosha chiitiko chakapa mukana weCouleur Lighting kuratidza shanduko yayo nehunyanzvi. Tinoda kutenda munhu wese akashanyira dumba redu kuEuroshop muDusseldorf. Kuisa kumeso kumazita uye kuunza Couleur Lighing mitsva nyowani yakaburitswa gore rino yaive mufaro wechokwadi! Couleur Kuvhenekesa kwechikwata kwakaratidzirwa hunyanzvi hwavo hwekuzivisa chigadzirwa chedu kumutengi wedu.
Takakoka mutengi wedu akashandira pamwe makore mazhinji kushanyira dumba redu, uye vatengi vazhinji vatsva vanoshanyira dumba redu futi.
Couleur Mwenje sehunyanzvi manufacuturer yeiyo LED Strip Mwenje yekushambadzira Mwenje bhokisi anopfuura makore gumi, pane mazana akati wandei emhando yeUSB Strip Mwenje.
Kune akawanda eUSB Strip Mwenje paEuroshop, ayo akave akabvumirana mukubvumirana nevatengi.
Chiratidziro chedu chakawanawo zvakanaka. Dumba redu rinokwezva vatengi vazhinji, nekuti chigadzirwa chedu chemhando yepamusoro uye ruzivo rwedu rwehunyanzvi.
Pane zvinhu zvakawanda zvisina chokwadi, Tichiri kuvhura chigadzirwa chitsva-RGB Dynamic Curtain LED Strip, iyo yakakwevera huwandu hwakawanda hwevatengi uye yakawedzera mavara akanaka kudumba redu.
Hunhu hweYedu Chigadzirwa-backlight & Edge-yakavhenekerwa mwenje yakagamuchirawo kurumbidzwa kwakakura kubva
Pamusoro pezvo, Isu tanga tichivhura chikuva cheedu nyowani ane simba ekuratidzira-RGB Curtain LED Strip uye yakagamuchira yakanakira mhinduro kubva kuEuroShop vashanyi.
RGB Curtain LED Strip chizvarwa chitsva che LED zvinoratidzira izvo zvinosanganisa zvakadhindwa zvemachira mifananidzo nezvifambiso mhedzisiro uye ine simba mhenyu inobata veruzhinji nekuunza zvakadhindwa zvinoonekwa kuhupenyu.
Iyo inogona kunge iri yekushandisa kune yakajeka bhokisi, iko chaiko shanduko kune ye-muchitoro kutaurirana iyo ichapa iyo ine simba uye isingakanganwike yekutenga chiitiko kune ako vatengi.
Iyo inoshandisawo kushongedza kwemba, Bhawa, Hotera uye zvitoro. Ichabata mumwe munhu maziso, uye ichakubatsira iwe.
RGB Curtain LED Strip inogona kunge iri maererano nechikumbiro chako kuti chigadziriswe, uye chinja rakasiyana ruvara zvaunoda.
RGB Curtain LED Strip ine zvimwe zvakanaka: kuisirwa nyore, kutaridzika kunogona kuvandudzwa nekukurumidza, zvakapetwa zvakawanda zviripo uye kuri kuendesa nekukurumidza kudzikisa mutengo wekufambisa.
Euroshop irwo rwendo rusingakanganwike, tinogona kumirira kuti titore muEuroshop2023 inotevera, tinogamuchirwa kuti titore dumba redu.
Post nguva: Feb-16-2020